China umphezulu Smooth Pultruded zu Plastic Flat Sheet mveliso kunye nabenzi | IBonai
Umphezulu oGudileyo oGqityiweyo we-FRP yeplastiki yePlati
1) Umxholo we-fiberglass malunga ne-27% -30%.
2) Ukumelana nemozulu kunye namandla okuzicoca
3) Ukuxhathisa okumthubi okugqwesileyo
I-4) yomelele, inefuthe elinganyangekiyo kunye neqondo lokuguqa eliphantsi
5) ukumelana namaqondo obushushu aphezulu -38 degrees +110 degrees ixesha elide
I-6) Ukumelana nokuguga: Ifilimu echaziweyo ye-F4 yongezwe kumphezulu kunye nengubo yejeli enyamezelayo kwakudala.
Iphepha le-fiberglass grp frp sheet.
Iimathiriyeli: ifayibha yeglasi eyomeleziweyo yeplastiki, umatshini wokwenza ngokuqhubekayo
Ukungena kwamanzi kuphahla lwe-FRP kuhlala kusetyenziswa ukhuselo lofakelo kwisiza, ucweyo lwentsimbi kunye nendawo yokugcina izinto, isigubungelo, ukupakisha iishedi, iipaseji, ukukhanya kwesitudiyo kunye ne-greenhouse awning ect njengokuhambisa okuhle kokukhanya.
Umbuzo: Ngaba ungumvelisi?
A: Ewe, singumvelisi, sinefektri yethu, ebekwe eHEBEI, CHINA.
Q: Ngaba singafumana iisampulu? Ngaba kukho ntlawulo?
A: Ewe, unokufumana iisampulu ezikhoyo kwisitokhwe sethu. Isimahla kwiisampulu zokwenyani, kodwa abathengi kufuneka bahlawule iindleko zothutho.
Q: Njani ngexesha lokuhambisa?
A: Ngokubanzi ziintsuku ezingama-20.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu.
Iglasi yefayibha yeglasi alias: ibhodi yeglasi yefayibha yokugquma, ibhodi yeglasi yefayibha (FR-4), ibhodi yeglasi yefayibha, njl. Inezinto eziphezulu zomatshini kunye neepropathi ze-dielectric, ukumelana kakuhle kobushushu kunye nokumelana nokufuma, kunye nokusebenza kakuhle. Isetyenziswe ekubunjweni kweplastikhi, ukubumba kwenaliti, ukuvelisa oomatshini, oomatshini bokubumba, oomatshini bokugrumba, oomatshini bokubumba inaliti, ii-motors, ii-PCBs, izixhobo ze-ICT, kunye neetafile zokucoca itafile. Inaliti yokubumba sukube ifuna: ubushushu obuphezulu kunye nobushushu obuphantsi. Indlela yokugquma ubushushu kufuneka yamkelwe phantsi kwemeko efanayo yomatshini. Gcina ukubumba ngenaliti kubushushu obuphantsi ngelixa ungenzi umatshini wokubumba oshushu kakhulu. Le mfuno inokufezekiswa ngokufaka iibhodi zokugquma phakathi kokubumba kwenaliti kunye nomatshini wenaliti. Nciphisa umjikelo wemveliso, wandise imveliso, unciphise ukusetyenziswa kwamandla, kwaye uphucule umgangatho weemveliso ezigqityiweyo. Inkqubo eqhubekayo yemveliso iqinisekisa umgangatho wemveliso ozinzileyo, ithintela ubushushu bomatshini, akukho kusilela kombane, kwaye akukho kuvuza kweoyile kwinkqubo ye-hydraulic.
Iplywood kunye neentonga zeglasi ezinamathele kumphezulu weglasi yefayibha yenziwa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu, kwaye umphezulu wayo wangaphandle unokumelana nomgangatho ophezulu wokufuma. Olu hlobo lwebhodi lulungele ukuvelisa izitya. Ubungakanani bonikezelo yile: ububanzi bebhodi bunokufikelela kuma-3658 mm, kwaye ubude bebhodi bunokuba nabuphi na ubungakanani, ukuya kuthi ga kwi-12 yeemitha. Umxholo weglasi yefayibha yi-25-40% ngokobunzima. Imibala esemgangathweni ingwevu kwaye ingaphantsi kumhlophe. Ibhodi inokucocwa ngomphunga.
Egqithileyo I-FRP Bonai Corrugated Fiberglass Sheet Factory GRP oyifunayo
Okulandelayo: Zu Gel Coat Sheet Van Ukumboza
Zu Fibreglass Grp Sheet
Zu Flat iPhaneli
Ishicilelo Flp Sheet
I-Prp Profile Strip
Iiprofayili ze-Frp Pultrusion
Zu Roof iPhaneli
Zu zophahla Sheet
Zee / Grp Fiberglass nokwadala